[22 / 08 / 2019] Iran, Turkmenistan, Kazakhstan na Azerbaijan kwurịtara Nkwado na Railway	98 Iran
[22 / 08 / 2019] Citizensmụ amaala ga-anọdụ na Varsak Bus Station Tram Stations!	07 Antalya
[22 / 08 / 2019] Njikọ ilzọ Railway na Organizationtù Na-arụ Ọrụ Akụ na ụba	06 Ankara
Trambus nke Bozankaya mere na Sanliurfa na May
Minista Vaish na-anwale Bozankaya na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi na nke enyi na enyi
Minister of Industry and Technology Mustafa Varank, Sileo (Silent) S10 nlereanya bọs mere site Bozankaya. Minista Varank, onye na-anọdụ n'oche ụgbọ mmiri nke ụgbọ ala na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi, nke na-adọrọ mmasị na ụlọ ya na eletrik, [More ...]
Ụmụ amaala na National Trambus na-abịa Sanliurfa
Site n'enye ihe omuma na omenala ya, Bozankaya Trambus ga-arụ ọrụ na njem ọha na eze na mpaghara nlegharị anya nke Şanlıurfa nke nwere ebe pụrụ iche na njem nleta ụwa. Bozankaya, Malatya, nke a na-emepụta maka nnweta nke njem ọha na eze na 20 mgbe Trambus gasịrị [More ...]
Mmetụta na-emerụ akụkọ ihe mere eme nke Urfa
Şanlıurfa Metropolitan ekwu na Council mmeghe iji dozie TRAMBUS oru ngo ga-emerụ obodo akụkọ ihe mere eme na-akpa ákwà Spoor Urfa Branch President Mehmet Selim agụụ na-agụ, ọ na kama dị ọnụ ala karịa na ha tụrụ aro na nna ya ukwu atụmatụ havaray usoro. Obodo ukwu nke obodo nke Şanlıurfa [More ...]
Site na Bozankaya gaa n'obodo ahụ
Bozankaya na-arụ ọrụ Trambus nke obodo Metropolitan Municipality nke Şanlıurfa, ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na akụrụngwa na nnukwu ụlọ na nrụgide siri ike. 8 2018 300 XNUMX kpebisiri ike maka njedebe nke atụmatụ achụmnta ego, ọ bụghị ihe niile a kapịrị ọnụ na nkwekọrịta ahụ, ikike ọ bụla nke XNUMX [More ...]
Akara na n'okporo ámá nke Sanliurfa na Septemba
A na-eme nkwadebe ikpeazụ na obodo ukwu nke obodo ahụ, bụ nke mejupụtara atụmatụ Trambus na Şanlıurfa. Izucha usoro amuma ume maka oru ngo, nhazi ihe omuma nke ulo oru ihe omuma, naele anya onye isi ugbo, 2 onwa mgbe oghachisiri ike iru n 'Sanliurfa [More ...]
Ngwurugwu niile na ụmụ akwụkwọ YKS na Malatya
Ná ngwụsị nke izu na chọrọ ịga nke ọma na ụmụ akwụkwọ ndị ga-udomo oro WGS Metropolitan Malatya Mayor Haji Uğur Polat, na-enye ụmụ akwụkwọ a ozi ọma, niile ụgbọ ala ga-ebu on ule ụbọchị free udomo oro ụmụ akwụkwọ. Nkwenye nke ọdịnihu anyị [More ...]
MOTAŞ ndị agha Tüfenkçi Minista maka ụtụtụ
Customs na Trade Minister Bulent TÜFENKÇİ, Malatya Municipality Transportation na Public Transport Services (motas) bịara na ọdụ ụgbọ ala ahụ n'isi ụtụtụ rie nri ụtụtụ na ndị ọkwọ ụgbọala ga-na mbụ mgbanwe. Anyị na-arụ ọrụ na-enweghị ihe nkedo ọ bụla si n'echiche nke obodo [More ...]
Ụgbọ njem ụgbọ mmiri na Malatya
Malatya Municipality Transportation na Public Transport Services na a na nkwupụta si motas ka. Ụmụ amaala, ha na di na nwunye, ndị enyi na-eli ozu nleta iji onwe ha ụgbọala mgbe n'udo iji gbochie si na-eme ka okporo ụzọ mkpọchi na-elekọta mmadụ na nghọta nke obodo [More ...]
Òtù ndị China maka Ụgbọ njem na Sanliurfa
Nihat Çiftçi, Mayor nke Şanlıurfa Metropolitan Municipality met with EurAsia Strategies for Şanlıurfa Light Rail Transportation Project and CAMC Engineering officials of China Company. Sanliurfa bụ obodo nke oge a n'ụzọ ọ bụla iji mezuo nnukwu ọrụ [More ...]
Ememe akwukwo na MOTAŞ
Malatya obodo ukwu MOTAŞ e guzobere iji nye ọrụ na mpaghara nke njem, ọzụzụ, asambodo na ndụmọdụ. Mayor nke obodo ukwu nke 18 [More ...]
23 April Trambus omenala ga-eme ka ụmụaka gaa njem n'obodo ha n'oge ha. Malatya Municipality Intercity Bus Ọnụ (más e) na-amalite na Mahadum na-aga ọzọ na-laghachiri nwe 23 April Trambü ụzọ ụzọ na-na na ụmụ maka free [More ...]
Sanliurfa Trambus Project End
Ikpeazụ 5 ebe TRAMBUS Project bụ imeri nsogbu ẹdude na Şanlıurfa njem mụbara site 25 percent nke ndị bi na afọ gara aga ruo ndụ ha na Şanlıurfa Municipality ọrụ. Ihe mbụ nke Trambus Project, nke ụmụ amaala kwadoro [More ...]
Iran, Turkmenistan, Kazakhstan na Azerbaijan kwurịtara Nkwado na Railway
Citizensmụ amaala ga-anọdụ na Varsak Bus Station Tram Stations!
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (326) July 2019 (637) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (494) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)